Maqal: Maleesho Duulaan ah oo xalay dagaal ku qabsaday magaalada Marka Cadeey – SBC
Maqal: Maleesho Duulaan ah oo xalay dagaal ku qabsaday magaalada Marka Cadeey
Posted by Webmaster on Juun 9, 2014 Comments
Wararka saaka naga soo gaaraya magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaal xalay ka dhacay magaaladaas uu sababay in ay gacan ku heynta magaaladaasi la wareegaan maleeshiyo ku soo duulay.
Dagaalkan oo ahaa mid beeleed maalmihii ugu dambeeyayna si weyn looga dareemayay gobolka Shabeelaha hoose ayaa xalay saqdhexe lugta la galay magaalada, iyadoo ay isaga bexeen maleeshiyo kale oo dhinaca marka ka soo jeeday iyo maamulkii dowlada federaalka Soomaaliya.
Mar aynu isku daynay in aan la xiriirno maamulka degmada marka si aan faah faahin dheeraad ah uga helno arinkaas ayaa noo suurta gali weyday balse ilo wareedyo soo baxay ayaa sheegaya in maamulka Marka ee Dowlada Federaalka ay isaga bexeen marka iyagoo taasi ku fasiray in ay tahay xeelad militeri maadaama dagaalka socday uu u dhexeeyay maleeshiyo labada dhinac ah.
Dhageyso warbixin Faahfahsan oo uu Muqdisho ku diyaariyay wariye Jeylaani Xuseen Yuusuf. RIIX AMA DAAR
Sikastaba ha ahaatee xaalka Magaalada Marka xarunta gobolka Shabeelaha hoose aya aah iminka mid aad u kacsan waxana jira xiisad kulul oo sababi karta dagaal markale halkaas ku dhexmara dhinicii ka baxay magaalada iyo kuwa soo galay, waxaana hakad ku jira dhaq dhaqaaqii dadka, ganacsiga iyo weliba gaadiidka.